MUQDISHU: Ra’iisul Wasaare CCC Sharmaarke oo kulan la qaatay Xildhibaanadda Jubbaland (SAWIRO)
Home /Blog/MUQDISHU: Ra’iisul Wasaare CCC Sharmaarke oo kulan la qaatay Xildhibaanadda Jubbaland (SAWIRO)
Musharaxa ugu taageerada badan xilka Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya ahna Ra’iisul Wasaaraha dalka Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa Qado sharaf ah maantay u sameeyay dhammaan xildhibaanadda Aqalka sare iyo kan hoose ee Dowladda Jubbaland.
Dr. CCC Sharmaarke, ayaa kala hadlay sidii ay taageero u siin lahaayen, maadaama uu ka mid yahay murashixiinta u taagan xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha, ayaa ka codsaday Xildhibaanada Labada Aqal in codkooda ay siiyaan, si dalka wax badan ugu qabto. Wuxuuna ballanqaaday haddii uu ku guuleysto qabashada xilka madaxtinimada dalka in uu wax badan qaban doono, isla-markaana uu khibradiisa kaga faa’iideynayo dalka.
C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare, ayaa soo dhaweeyay codsiga Ra’iisul Wasaare Sharmaarke, isagoona ka dhawaajiyay in Soomaaliya u baahan tahay is bedel hogaamineed.
Ra’iisul Wasaare Sharmaarke, ayaa ah masuulka labaad ee ugu sareeya dalka, isla-markaana u sharaxan jegada madaxtinimada dalka kaasi oo taageero badan ka haysta inta badan xildhibaanadda cusub ee Dowladda Federalka ee Soomaaliya isaga oo dhinaca kalena hal-ku dhigiisu yahay XASILLOONI SIYAASADEED.
ETHIOPIA: Political trap against Daarood is on course
Qiso cajiib ah oo dhab oo ka dhacday dalka Sucuudiga